जोखिम क्षेत्रमा विद्यालय नखोल्न शिक्षा मन्त्रालयलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्ताव
काठमाडौं, ३० भदौ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जोखिम रहेका क्षेत्रमा तत्काल विद्यालय नखोल्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको छ ।
बुधबार शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले शहरी क्षेत्रमा तत्काल विद्यालय नखोल्न आग्रह गरेको हो ।
‘हतारमा जोखिम भएका ठाउँमा विद्यालय खोल्नु हुँदैन भनेका छौँ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्ण पौडेलले शिलापत्रसँग भने, ‘विद्यालय खुले भने कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ ।’
१ असोजदेखि काठमाडौं उपत्यकामा विद्यालय खोल्ने तयारी गरेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल गरेका हुन् । शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले पनि बालबालिका सुरक्षित हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । ‘बालबालिका सुरक्षित रहनुपर्छ । स्मार्ट लकडाउन अनुसार विद्यालय सञ्चालन गर्ने विषय हामीले राखेका छौँ,’ शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले शिलापत्रसँग भने ।
शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय खोल्ने र बन्द गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । त्यसैका आधारमा स्थानीय सरकारले भटाभट विद्यालय खोल्न थालेका छन् । काठमाडौंकै कतिपय नगरपालिकाले भौतिक रूपमा विद्यालय सञ्चालन गरिसकेका छन् । ५ सयभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेकाले काठमाडौंमा अहिले नै विद्यालय खोल्न नहुने विज्ञ र अभिभावकले बताउँदै आएका छन् ।
‘दसैंको मुखमा विद्यालय खोल्ने निर्णय भयो । १ असोजमा विद्यालय खोलेर दसैंका लागि २० गतेबाट बन्द गर्नुपर्छ । हतारमा विद्यालय खोल्ने निर्णय किन आयो ? शहरी क्षेत्रमा तत्काल भौतिक रूपमा विद्यालय खोल्नु उपयुक्त छैन,’ अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले भने ।
संक्रमणदर ५ प्रतिशतभन्दा कम नभएसम्म विद्यालय खोल्न नहुने स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ । हाल संक्रमणदर ९ प्रतिशत रहेको छ । काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिबीच १ असोजदेखि भौतिक रूपमा विद्यालय खोल्ने सहमति भएको थियो ।
« विद्यालय र स्वास्थ्यक्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि विश्व बैंकको ५ अर्ब ८७ करोड सहयोग
पाथीभरा मन्दिर दर्शनार्थीका लागि खुला »